Waxaan ku falanqeyneynaa Samsung MU6125 TV, 4K iyo HDR 10 adeegga dhexdhexaadka | War gadget
Waxaan ku falanqeyneynaa Samsung MU6125 TV, 4K iyo HDR 10 adeegga bartamaha
Telefishannadu waxay leeyihiin astaamo aad iyo aad u badan oo naga dhigaya inaan nafteenna ku weyno badda qeexitaannada, Ma lihin wax kale oo aan ka aheyn inaan aadno internetka, mana aha wax sahlan in aan ku dhammeysano iibsashada bakayle aag ballaaran, gaar ahaan tixgelinta qiimaha kala duwan ee aan ku qiimeyn karno xaaladahaas. Waxaan ka hadleynaa xaqiiqda ah in suuqa telefishinka ay hadda ka buuxaan shirkado bixiya alaabo la mid ah qiimahoodu aad u kala duwan yahay… maxay tahay farqiga dhabta ah?
Maanta waxaan falanqeyn doonnaa telefishin dhexdhexaad ah oo leh qeexitaanno aad u sarreeya, taasna waxay lahayd qiimo aad u wanaagsan intii lagu jiray Jimcihii Madoobaa, waxaan ka hadleynaa telefishanka Samsung MU6125, oo ah TV dhexdhexaad ah oo keenaya xallinta 4K iyo astaamaha HDR 10 dhammaan jeebabka, aan halkaa ugu tagno falanqaynta.
Sida had iyo jeer, waxaan dooneynaa inaan si faahfaahsan u falanqeyno astaamaha telefishankan oo noo soo bandhigaya naqshad la mid ah tan taxanaha kale ee Samsung oo shaki naga dhigi kara, shaki la'aan waa inaan ku qasbanaano faahfaahin gaar ah si aan u ogaano inay tahay mid ka mid ah aaladda qalabka tayada badan ee Korea laga hagaajiyay inkasta oo aysan helin booskii ay ugu qalantay khaanadaha dukaamada waaweyn, si hufan faahfaahintaan awgeed. Waa in la ogaadaa in cutubka aan falanqeyneyno lagu iibsaday dukaanka 499 euro, in kasta oo xaqiiqda ay haatan marayso koror xoog leh oo ku yimid qiyaastii 679 euro sida ku cad dukaamada takhasuska leh.
1 Naqshad: Aad u caadi ah, aad u Samsung ah
2 Astaamaha farsamada: Isku hagaajinta heerka dhexe ee telefishanka
3 Dhammaanba waa ku habboon yihiin: Kuwa ugu fiican Samsung MU6125
4 Waxyaabaha taban: Tan ugu xun Samsung MU6125
Naqshad: Aad u caadi ah, aad u Samsung ah
Wax badan kama fili karno naqshadeynta, badanaa sababta oo ah qaybaha sida taageerada iyo geesaha ayaa gebi ahaanba dib loo isticmaalay taxane kale, si gaar ah waxaan u leenahay taageero la mid ah qalabka ugu badan taxanaha samsung 6 telefishanka. Wareegyada madow ee anthracite waxay ka samaysan yihiin waxyaabo caag ah oo dhammaaday Jet Madow, dadka jecel boodhka iyo xoqitaanka yar-yar ee suurtogalka ah, taasi waa sababta ay muhiim u tahay in maanka lagu hayo in haddii aynu nahay kuwa jecel nadaafadda qoto dheer, TV-gan waa inuu ka taxaddaraa arrintaas, inta badanna wuxuu ku sharxayaa boodhka ama microfiber
Qalabka caaga ah meel kasta, si fiican ayaa loo qariyey. Samsung waxay sifiican u ogtahay in ay qariso faahfaahinta noocan ah, tan waxaan uga jeednaa mar haddii telefishanka la dhigo inay si fiican u dhex mari doonto walxaha Premium, laakiin markay tahay kor u qaadistiisa, waxaan ogaan doonnaa in miisaanku fududahay taasna mahaddeeda qaloocnimada awgeed waxay si fiican u haysaa guddiga weyn ee tan 50 inch TV.
Waxay la mid tahay kantaroolka, kontoroolka buuxa ee badhamada, balaastigga oo aan lahayn naqshad naqshadeyn ah, shaqeynta ayaa mar labaad guuleysata, gaar ahaan iyadoo la tixgelinayo fursadaha ballaaran ee nidaamka ay ku shaqeynayaan na siinayaan. Kuwani waa cabbirkeeda rasmiga ah:
Wadarta salka: 1128.9 x 723.7 x 310.5 mm
Miisaanka taagan: 13,70 kg
Astaamaha farsamada: Isku hagaajinta heerka dhexe ee telefishanka
Sida had iyo jeer ah, waxaan soo koobi doonnaa astaamaha farsamo ee ugu muhiimsan, markaa waad ogaan kartaa waxaad ku socoto. Iyaga ka mid ah, waa in la ogaadaa in kasta oo ay jiraan dhowr USBs iyo xitaa Ethernet, si loogu raaxeysto qalab badan oo fara badan, waxa aan heli karin waa Bluetooth, wax seegi kara gaar ahaan marka la isku xidhayo qalabyo dheeri ah oo dheeri ah.
guddi 50 inji fidsan
Go'aan: 4K 3840x2160
HDR: Teknolojiyada HDR 10
Iskuxirka HDMI: 3
Iskuxirka USB: 2
Audio: Laba 20W oo kuhadlaya Dolby Digital Plus oo leh Bass Reflex
Maareynta midabka: PurColor
Saamaynta dhaqdhaqaaqa Isbarbar dhiga Mega
Soo saarida maqalka indhaha
Laakiin wax la tixgeliyaa sidoo kale waa awoodda qalabka qarinaya TV-gaaga casriga ah, taasina waa in Samsung ay ku sharraxdo qalabkeeda iyo nidaamkeeda hawlgalka, taas oo ka dhigaysa mid si weyn u shaqeyneysa, Actualidad Gadget oo aan mar walba jecel nahay Android TV, Waa inaan sheegno in Tizen qalab dheeri ah gebi ahaanba aan loo baahnayn hawsha noocan ah. Qodob kale oo muhiim ah ayaa ah in aan wajaheyno telefishan leh heerka A tamarta wax ku ool ah, ma ahan tan ugu fiican suuqa, laakiin waxay bixisaa natiijooyin cajaa'ib leh oo ku saabsan isticmaalka.
Dhammaanba waa ku habboon yihiin: Kuwa ugu fiican Samsung MU6125
Waxaan leenahay qiimo aad u weyn oo tartan ah, waan wajahnay guddi VA ah oo leh xallinta 4K oo na siisa isbarbardhigyo aad u wanaagsan, taas oo ah, waxaan awoodi doonnaa inaan ku raaxeysanno sawirro xasilloon qaraarada wanaagsan, daadasho khafiif ah iyo cirro wanaagsan. Xaqiiqdu waxay tahay in sawirku u muuqdo mid aad u fiiqan, in kasta oo la tixgelinayo inaan wajahayno guddi 50-inji ah, waxay si muuqata u luminaysaa go'aannada ka hooseeya 1080p Full HD.
Nidaamkeeda hawlgalku waa mid cajiib ah, waxaan ku raaxeysan karnaa waxyaabaha ku jira qadka tooska ah iyadoo loogu mahadcelinayo barowsarkiisa iyo ka faa'iideysiga xiriirka WiFi, oo awood u leh xitaa isku xirka 5 shabakadaha GHz. Netflix iyo xitaa Movistar + Maaddaama aan nahay codsiyo iswaafajiya dukaankaaga waxaan ku raaxeysan karnaa waxyaabaha ku jira HDR khadka tooska ah iyo xallinta 4K. Marka Tizen wuxuu noo ogolaanayaa inaan sifiican uga faa’iideysano telefishanka.
Codku wuxuu isku difaacaa qaab cajaa'ib leh, sidoo kale waxaa lagu weheliyaa fiilada muraayadaha iyo sameynta lammaane wanaagsan oo leh baarka dhawaaqa, astaamaheeda Dolby ayaa la muujiyey in ka badan intii ku filan. Shaki la'aan, telefishanku si fiican buu u shaqeeyaa wuxuuna muujiyaa wax ka badan inta ku filan dadweynaha guud ahaan noocyada noocan ah.
Waxyaabaha taban: Tan ugu xun Samsung MU6125
Wax walba ma fiicneyn, hoos u dhaca hore ayaa ah waxaan hor joognaa guddi ka kooban 8BitsTani waxay ka dhigan tahay in kasta oo aan haysanno HDR 10 oo aan ka faa'iideysan doonno heerka ugu wanaagsan ee HDR, haddana ma awoodi doonno inaan dhex marno inta u dhexeysa dhammaan noocyada ay na siiso, waana tan tan waxaan ugu baahan lahayn guddi 10Bits, miyaad dareentaa faraqa? Waxaa laga yaabaa inaysan ku filnayn isticmaalaha caadiga ah.
Sidoo kale waxaa ka maqan telefishanka Bluetooth, shay aanan daruuri u seegi doonin, ilaa aad rabto inaad ku keydiso fiilooyinka, tusaale ahaan markaad isku xireyso sanqadh isku mid ah, ama tusaale ahaan qalabka xakamaynta ee ku jira istcimaalaha isticmaalaha. Ugu dambeyntiina, ogow in aysan u muuqan telefishanka ku habboon in la ciyaaro, gaar ahaan isticmaalaha ugu baahida badan marka la eego nasinta iyo soo noqoshada, in kasta oo xaqiiqda aynnu leenahay qaab ciyaar oo xaaladda si fiican u xalliya, waqtiga jawaab celinta ee 10 ms , Ma ahan wax badan, seddex jibaar tusaale kormeerayaal takhasus gaar ah leh.
Nidaamka TV-ga casriga ah
Shaki la'aan, waxaan wajaheynaa telefishan aad ugu adag qiimaha, laakiin astaamaha, Samsung waxay ku egtahay jarista xoogaa dheeri ah, laakiin muuqaalka muuqaalka, sidaasna ku helay shaashad 50-inch ah oo leh astaamo waaweyn. In kasta oo ay run tahay haddana uma muuqato wax soo jiidasho leh markay tahay qiyaastii 700 oo euro, haddii aan tixgelinno in lagu arki karo iib ahaan laga bilaabo 499 euro waxay noqon kartaa ikhtiyaar ku habboon in lagu beddelo telefishanka. Xaqiiqdii sicirkaan waxaad si dhib leh uga heli doontaa wax fiican suuqa.
Naqshadeynta Minimalist iyo qaab yar
4K iyo HDR10
Iyadoo aan lahayn Bluetooth
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Waxaan ku falanqeyneynaa Samsung MU6125 TV, 4K iyo HDR 10 adeegga bartamaha
Waxaan doonayay inaan ogaado haddii telefishankani leeyahay wax soo kordhin HDMI 2.0 ah
Ku jawaab Mariano
Waad salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida aan ugu xidhi karo dhagaha. Mahadsanid
Ma laha Bluetooth.
Hadda waad xiri kartaa Mark Zuckerberg Facebook